Indlela yokunqoba le amadoda - lo mbuzo sibonakala lalihlala futhi ngeke ayeka ukuba ikhathaze izingqondo ubulili fair. Kugcine, ukuze babe yingxenye yokuphila kwakhe futhi zidlule lonke ekuphileni ndawonye ... Yini enye baphupha owesifazane oqotho?
Iqiniso lokuthi umuntu ngamunye uhlukile, bathi, ithemba akudingekile. Ngenxa yalokho isifunda esimweni ngasinye zizohluka. Ungakwazi, Nokho, ukuletha imithetho embalwa jikelele futhi izimfihlo ukuthi kungavula kithi imfihlakalo indlela charm indoda. Eyokuqala, wesibili, futhi uhlu kuqhubeka - njalo shape. Abesilisa uthande ngamehlo abo - oh, indlela ilungelo Folk ukuhlakanipha! Yiqiniso, lokho akusho ukuthi udinga ukusebenzisa kuya salon okwesikhathi manicure osayizi 15-cm begodu 4 abicah ... mmm ... izindebe. Ngakho sicela ungayididanisi ubuhle kanye vulgarity. Lezi yizinto ezahlukene ezingaba ukuheha izinhlobo ezahlukene amadoda ahlukahlukene abanezinhloso ezinhle.
Lo wesifazane - imfihlakalo ukuxazulula ukuthi ngaphambi kokuphela kahle, akazange aphumelele ukubuyisana nomkakhe. Boys, amadoda kanye nogogo nomkhulu, lesi sici ekhangayo. Asikho isidingo ukuxosha zonke ngaye njengoba umoya ngosuku lokuqala. Ake lonke ulwazi olufanele ogeleza kabuthaka nangokuthula unobtrusively izingxenyana ezincane.
Ukuthandeka, engasenathonya ukuzethemba. Lezi zimfanelo akasoze kungaqashelwa futhi ayaziswa. "Thanda wena" kusho "ukuthandwa yibo bonke," "futhi bethandwa zonke" - ". Sokuthandwa kubo ezibizayo futhi eyingqayizivele ' Hlala elula futhi ekhululekile, bayazidlalela futhi ukuhleka, ngokuvamile - ube nguwena. Usuke okuqinisekisiwe impumelelo!
lady lungafinyeleleki. Enye mkhuba ebalulekile kuyi- indlela yokunqoba amadoda. Banqobi abazingeli - akuthathi kude abesilisa kweqiniso, abanqobi wezinhliziyo zesifazane. Lena akuyona indaba abafazi ubudala '! Izibalo inexorable: Okokuqala
izinsuku ukuthi ukuqeda embhedeni, kokuthile eba engadluli u-1%. Uyazi yini ukuthi ukubiza i-emehlweni etholakalayo kakhulu amantombazane abafana? Kunjalo. Futhi-ke, kungani ukuphuca ngokwakho kuzo zonke izintelezi of a yothando candy buketnogo?
Tricks Trade. Hhayi okwamanje kuphela ukuphatha isimo! Late ngoba usuku "ngenxa ukuhlonipha," ukubaleka ke kancane ekuqaleni, "zizwe" ucingo lwakhe - izinto ezinjalo kungaba futhi kufanele ijabulele. Into esemqoka lapha, ukwazi ngesilinganiso, ngoba akunakwenzeka udinga izinsolo ezingenasisekelo izingxabano.
wokuzilibazisa lakhe - wokuzilibazisa yethu. Khuluma mayelana oyithandako kungenziwa ngaphandle komzamo idluliselwe wokuzilibazisa yakhe. Yini ayenzayo ngesikhathi sakhe sokuphumula, lokho kunjalo ngamabhayisikobho nangezincwadi uthando, ukuthi umculo ukulalela? Futhi unga, futhi enza sha iqoqa kanye emizini eyintandokazi lebhola ngohambo? Ngakho empeleni ungakwazi zonke ukukwenza ndawonye. Thola mayelana ezokuzilibazisa ngangokunokwenzeka ( "Google" ukuze akusize, njengoba besho) - nokuningi! Kancane isithakazelo esiqotho - ayinqobe indoda-ka Taurus, Umdlavuza futhi Aries (kungakhathaliseki ngokuvamile) kuyoba lula kakhulu.
Shine engqondweni. Phila impilo nge isikhohliso, ukuqonda kuphela izinhlobo pedicure and solarium - Kulula ukukholelwa esithembisweni ezingabazisayo. Ukuzithuthukisa - yilokho okufanele silwele ukuphila kwabo konke. Uma awanandaba ungakwazi ukuqagela umlando noma imoto, ungaqiniseka: wena wathola nemfihlo kanjani ukuba banqobe amadoda.
Ayikho ekunukubezweni! izimangalo ngokweqile ngokwamukelwa inkululeko kungaba kuphela ukumethusa. Kwaneliswa nezifiso, abafuna ngenkani - shiya konke ukuhamba kwesikhathi. Elingcono - futhi akhohlwe ngazo. Awuzange wathatha isikhundla oqinile enhliziyweni yayo - ungakhohlwa ngakho!
Ngakho, singakwazi kalula ukubona ukuthi iminyaka eminingi izincomo jikelele sendlela uwine amadoda musa ngempela zishintshile. Futhi zonke ngenxa ukuthi amanani jikelele kungokwaphakade. Ngifisa sengathi ngabe impumelelo nothando!
Ukufakwa mbumbulu umoya: imfundo
Kazan Optical kanye Mechanical Plant, Kazan
Izidakamizwa "Anuzol" (amakhandlela) umyalelo.